Facebook မှာ Schedule လုပ်ပြီး ပို့စ်တင်နည်း ~ မြန်မာမိုဘိုင်းနည်းပညာ Facebook မှာ Schedule လုပ်ပြီး ပို့စ်တင်နည်း
Home » Unlabelled » Facebook မှာ Schedule လုပ်ပြီး ပို့စ်တင်နည်း
Facebook က Page များမှာ Schedule လုပ်ပြီး ပို့စ်တင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Facebook အကောင့်မှာတော့ အဲဒီစွမ်းဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း မရှိပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ Facebook အကောင့်မှာ Schedule လုပ်ပြီး ပို့စ်တင်ရမယ့် အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ည ၁၂ နာရီတိတိမှာ ဆုတောင်းပေးတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ၁၂ နာရီထိုးတဲ့ အထိ စောင့်ဆိုင်းနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အဲဒီလို Schedule လုပ်ပေးနိုင်တာက Postfity ဆိုတဲ့ Web App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Postfity ၀က်ဆိုက်ကို အောက်ပါ လင့်ကနေ သွားပါ။
1. L og In with Facebook ကိုနှိပ်ပါ။ Postfity ကို သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့ Okay နှိပ်ပေးပါ။
2.နောက်အဆင့်မှာတော့ Not Now သို့မဟုတ် Okay ကိုနှိပ်ပါ။
3.Postfity ၀က်ဆိုက်ကို ပြန်ရောက်သွားရင် Connect account ကိုနှိပ်ပါ။
4. သင့်ရဲ့ Profile Picture ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ချိတ်ဆက်ပါ။
5. ဒါဆိုရင် Profile Picture က အရောင်မှိန်နေရာကနေ လင်းလက်သွားပြီး Postfity နဲ့ သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့် ချိတ်ဆက်မိသွားပါပြီ။ Create posts အောက်မှ Box မှာ စာရေးနိုင်ပြီး Attach photo ကိုနှိပ်ရင် ဓါတ်ပုံတွေ တင်နိုင်ပါတယ်။ Schedule ခလုတ်ရဲ့ ညာဘက်ဘေးမှ Drop-Down Arrow ကိုနှိပ်ပြီး Schedule ကို နှိပ်ပါ။
6. အချိန်နဲ့ နေ့ရက် သတ်မှတ်ပေးပြီး Timezone ကိုရွေးပေးပါ။ Timezone မှာ Myanmar မပါပေမယ့် Singapore, Bangkok စတဲ့ နီးစပ်ရာနိုင်ငံများရဲ့ အချိန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချိန်နဲ့ ကွာခြားချက်ကို တွက်ချက်ပြီး သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Save schedule ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
7. ပြီးရင်တော့ Create posts ကဏ္ဍရဲ့ အောက်ခြေမှ Browse or edit scheduled posts ကဏ္ဍမှာ ပို့စ်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Schedule လုပ်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို Delete လုပ်နိုင်သလို Edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Postfity မှာ Facebook သာမကဘဲ Twitter, LinkedIn တို့နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
Credit: Myanmar Digital Life Journal
Social Duplicator Tweak
Tool3English Version Download